Kuwani waa qaar ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee Photoshop ee 2020 | Abuurista khadka tooska ah
Beddelka ugu fiican ee Photoshop
Manuel Ramirez | | Gimp, Qalabka Naqshadeynta, Photoshop
Muuqaalka barnaamijyada tafatirka sawirku wuu is badalay oo inagu filan oo leh waxyaabo kale oo dhab ah oo Photoshop ah ka yimid Adobe. Iyo in ka badan haddii ay suurta gal tahay markii sidan oo kale waxaa loo gudbiyay Sirdoonka Artifishalka inuu na badbaadiyo howlaha iyo dadaalka.
Horumarkaas weyn ee barnaamijka Adobe, waxyaabaha aasaasiga ah iyo kuwa wax yar ka sii adag, waxaa jira xulashooyin aad muhiim u ah oo aanan iska indho tiri karin. Waxaa jira iyaga bilaash ah oo waxaa jira iyaga oo qiimo ka yar, laakiin waa ka fog tahay noocaas rukunka ah ee Creative Cloud uu ina haysto hadda. U tag.
1 Sawirka Xariirka
5 Sawir qaade
8 Rinjiga Sawirka Corel
Haddaan raadino bedel dhab ah waana taas la soo saaray si loogu daro astaamo cusub oo ka dhigaya bedelka ugu fiican ee Photoshop, kani waa Photo by Affinity. Barnaamij loogu talagalay naqshadeynta garaafka iyo dib-u-hagaajinta sawirrada oo ku dayanaya Photoshop dhowr waxyaalood oo aynaan bilaash ku haysan.
Haa, ilaa iyada oo loo marayo hal bixin oo dhan 54,99 euro waxaan ku soo qaadaneynaa barnaamij tayo sare leh oo dib u hagaajinta sawir gacmeheena ah. Waxaan horey uga soo hadalnay munaasabado badan oo ku saabsan wanaagga iyo faa'iidooyinka Sawirka Affinity si aan u muujino qaar ka mid ah astaamaheeda ugu wanaagsan sida tafatirka RAW, isku darka HDR, tolida panorama, diiradda saarista, ka shaqeynta dufcadda, tafatirka feylka PSD, sameynta muuqaalka ee 360, halabuur badan , walxo caqli badan iyo xirfado kala duwan oo loogu talagalay rinjiyeynta dhijitaalka ah.
Waa a barnaamijka noocyada kala duwan ee dadka isticmaala, iyo inay leedahay heerkaas kakanaanta kakooban ee adeegsadaha xirfadlaha ah iyo sidoo kale fududaanta uu hiwaayad u eegi karo isagoo galaya naqshadeynta garaafka, rinjiyeynta dhijitaalka ah ama dib u hagaajinta sawirrada. Ku soo biir taxane kale oo muujinaya Affinity sida Daabacaha o naqshadeeye; ha moogaanin Barnaamijyada Affinity iskudhafka muhiimka ah.
Waxaad awoodi kartaa iskuday tijaabada Sawirka Affinity si loo tijaabiyo ka dibna go'aan looga gaaro iibsiga ugu dambeeya ee hal lacag bixin.
Sawirka isku xidhka - Web
Adobe waa mid aad u firfircoon waayadan dambe oo leh barnaamijyo taxane ah oo ballaaran oo loogu talagalay aaladaha mobilada maahan oo keliya ballaadhintooda sii kordhaysa, laakiin sidoo kale maxaa yeelay iPad-ka waxaa ka jira barnaamij awood u yeeshay inuu noqdo midka ugu fiican si loo sawiro loona naqshadeeyo sheyga Apple, kani waa Procreate.
Procreate waa barnaamij leh astaamaha horumarsan ee Adobe Lightroom ku soo daray qaybtiisa 6.0 ee taleefannada gacanta, iyo ka mid ahaanshaha barnaamijyada loogu isticmaalka badan yahay naqshadeynta dhijitaalka iyo sidoo kale rinjiyeynta. Runtuna waxay tahay in sanadahan oo dhan ay ka soo gudubtay inay noqoto barnaamij fudud oo lagu socdo noqoshada mid aad u adag loo helay bedel dhab ah kuwa raadinaya wax sida 'Photoshop' ku jira iphone-kooda.
Dhibaatada ugu weyni waa taas kaliya waxaa loo heli karaa aaladaha mobilada ee Apple, sidaa darteed inteenna kale ma lihin ikhtiyaar aan ku tijaabino. Weli, waa beddel weyn oo loogu talagalay barnaamijka naqshadeynta Adobe; gaar ahaan burushyadaas oo ku dayanaya isku dareen ah qalin qalin gacanta ku haya oo awood u leh inay dareemaan isku dareen sida markaan ku cadaadinayno xaashida warqada caarada.
Waxaa lagu heli karaa € 9,99 oo ku yaal App Store, si aad u ogaato meesha aad ka raadsaneyso.
Abuur - Web
Rebelle waxaan wajaheynaa barnaamij loogu talagalay Windows iyo OS X taas waxaa lagu gartaa ku dayashada farsamooyinka sawir gacmeedka iyo farshaxanka. Xaqiiqdii waa tan aan ku aragno inbadan oo ka mid ah barnaamijyo badan sida Procreate-kii hore ama Adobe Fresco oo aan ugu dambeyn ku helnay Windows tan iyo xagaagan la soo dhaafay.
Sidaan soo sheegnay, qiimaheeda ugu weyni waa kartida ku dayashada farsamooyinka soo jireenka ah, iyo si loo soo koobo, biyo-biyoodkiisu waa mid gaar ah. Taasi waa, waxaad awoodi doontaa inaad ku daydo dareenkaas ah inaad ku dhaqdo burush ku dayanaya farsamada midab-biyoodka. Taasi waa, waxaan xitaa awood u yeelan doonnaa inaan ku shubno dhibic biyo ah shiraac si aan ugu raaxeysanno sida ay ugu fideyso dhinacyada oo dhan sidii inaan ku qabaneyno mid dhab ah.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan awoodi doonaa inaanu astaysto xaddiga biyaha ee dhibicdaas, dhererkiisa, iyo cabirka dhibicda. Uma baahna noocyo badan oo hore oo ah buraashka, sidaas darteed gabi ahaanba ma fiicna. Haa, waxaan ikhtiyaar u leenahay inaan tijaabino tijaabo, mana lahan nooc loogu talagalay aaladaha mobilada, sidaas darteed wax walba waxaa loogu talagalay Windows iyo OS X qiimo dhan $ 89,99.
Dhamaan mid bedel u ah Photoshop oo loogu talagalay rinji dhaqameedka iyo faahfaahintaas loogu talagalay biyo-biyoodka aynaan iska indhatiri karin; Xaqiiqdii, waxay naga dhigeysaa inaan ka fikirno waxa aaladaha aan ku haysan doono gacmaheena barnaamijyadan ay noqon doonaan sanado yar gudahood.
Jabhadda 3 - Web
Waxaan mar kale gacanta ku haynaa qalab kale oo loogu talagalay sawir dhaqameed badan taasina waxay ku dayanaysaa farsamooyinka ugu caansan ee la yaqaan sida dhuxusha, saliida ama acrylic. Waxaa laga yaabaa in qiimaha ugu weyn uu yahay qiimahiisa hoose iyo qaar ka mid ah faahfaahintaas oo lagu bilaabayo rinjiyeyntaan dhijitaalka ah iyadoo aan lacag badan la isticmaalin.
Si loo muujiyo interface-kaas oo marka aan bilowno inaan sawirro sameyno isla baabi'iya si aad uga tagto kaliya shiraac maran markaa waxaan diiradda saari karnaa hal-abuurnimadeena iyo hibada sawir-gacmeedka. Xaqiiqdii, markaan joojino sawir qaadista markale, kaliya aaladaha sida aadka ah loo isticmaalo ayaa si sixir ah "u muuqda" sidaa darteed waxaan diirada saari karnaa howsha.
Xaaladdan oo kale haa waxaan haynaa noocyo ku saabsan Windows iyo OS X oo hal dhinac ah, halka kan kale uu yahay nooc u gaar ah oo u gaar ah aaladaha mobilada sida IOS iyo Android qiimo aan ka badnayn 4 euro. Haddii aan rabno inaan marinno nooca desktop-ka, wax baa is beddelaya si loo gaaro $ 79.
Iyada oo tan dalab, iyo waa maxay web, waxaan ilaawnaa waxa barnaamij uu la socdo rakibahiisa, ha noqdo APK loogu talagay Android ama .EXE ee Windows, si aad u tagto degel aan ka heli karno barnaamij u heellan soo celinta sawirrada.
Waa kan ugu horreeya liiska oo lagu beddelan karo Photoshop marka la eego dareenka ballaadhan ee dib loo hagaajinayo sawirradaas oo aan dooneyno inaan ka wanaajino sidii ay ahaayeen. Sababta ay ujirtaa waxay tahay barnaamij adag oo hawlo horumarsan leh taasi waa mid awood u leh in laga soo raro shabakada si qofkasta oo kombuyuutar leh uu si buuxda u maamuli karo. Taasi waa, waxaan awoodi doonnaa inaan dib u hagaajino sawiradeena si fiican si aanan u tuurin barnaamijka Adobe waqti kasta.
Qaar ka mid ah wanaagga Photopea waxaa ka mid ah lakabka iyo taageerada maaskaro, qaabab isku dhafan iyo dhowr qalab in laga xusho magnetic lasso ilaa mid si dhaqso ah loogu doorto Photoshop Magic Wand. Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku saxdo oo aad ku beddesho sawirrada dhammaan raaxada taas oo macnaheedu yahay inay tahay barnaamij mareeg ah oo aan ka heli karno meel kasta.
Bixinta rukhsad bille ah oo loogu talagalay kuwa doonaya inay qariyaan xayeysiinta in aan arki doonno kuwa aan bixin.
Sawir - Web
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyadooda loogu talagalay naqshadeynta garaafka iyo dib u soo celinta sawirka walaxda weyn taasina waxay nala jirtay sannado badan. Mid ka mid ah wanaaggeeda ugu weyn ayaa ah noocyadiisa kala duwan ee Windows, Linux iyo OS X. Sida aan uga hadlayno barnaamij furan oo bilaash ah oo aan ka heli karno iyadoon wax lacag ah la siinin oo leh hareeraha bulshada adeegsadayaasha iyo horumariyeyaasha bixiya casharrada iyo taga cusbooneysiinta si aan looga tagin muuqaalada.
Runtii waxaan leenahay a Qalabka GIMP ee loo yaqaan PhotoGIMP in wuxuu u beddelaa isla barnaamijka barnaamijka Adobe. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo qalab ah oo aan ka heli karno Photoshop iyo inay gebi ahaanba bilaash tahay ayaa ka dhigtay isticmaaleyaal badan inay u haystaan ​​beddel kan Adobe.
Waxaan haynaa aaladaha sida burushyada ranjiga, sixitaanka midabka, dheelitirka, xulashada iyo hagaajinta sawirada. Kooxda mas'uulka ka ah horumarinteeda ayaa had iyo jeer awood u leh inay ku bedesho kuwa miisaaniyaddoodu xaddidan tahay.
Uno ee barnaamijyada ugu fiican ee aan ku hayno shabakadda iyo in muddo ka dib ay sidoo kale soo fiicnaatay inay noqoto bedel kale oo Photoshop ah oo lagu xisaabtamo. Gaar ahaan markaan ku haynin meel ku filan xusuusta PC-ga oo aan dooneyno inaan shabakadda ka raadinno barnaamij noo oggolaanaya inaan dib u cusbooneysiinno sawirrada oo aan ku dhaqaaqno ficillo aasaasi ah oo caadi u ah barnaamijyadan.
Qaar ka mid ah astaamaheeda ugu fiican ayaa ah hel 600 nooc. Runtuna waxay tahay in is dhexgalku uu la mid yahay Photoshop, markaa waxaad isku arki doontaa gurigaaga markaad ka isticmaaleyso Firefox ama Chrome.
Rinjiga Sawirka Corel
Mana seegi karin mid ka mid ah barnaamijyada Corel si loogu beddelo midka kor ku xusan. PHOTO-Paint by Corel waa tifaftire sawir qaade ah oo ka yimaada qaybta CorelDRAW ee barnaamijyada. Waxaa si sax ah loo cusbooneysiiyey sannadkan 2020 barnaamij si fiican loo qaabeeyey iyo astaamahaas iskaashi ee aan maanta kula qabsanay barnaamijyo badan.
Waxay leedahay qalab xirfadeed si la shaqee vector-ka, lakabyada, tafatirka sawirada iyo aaladaha loogu talagalay qoraalka in aanan ka tagi karin marka ay timaado helitaanka barnaamij tayo leh. Faahfaahin ahaan, waxay bixisaa taageero loogu talagalay 4K iyo shaashado badan, markaa haddii aad raacdo kombiyuutar leh Windows 10 nasiib ayaad ku jirtaa.
Rinjiga Sawirka Corel - Web
Mid kale ayaa u heellan Apple iyo in waqtigan waxaan u tagnaa naqshada UI iyo UX ee shabakadda. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad raadineyso barnaamij aad ku naqshadeyso dhammaan walxaha uu interface ka koobnaan karo, ha ahaato degel ama barnaamij loogu talagalay qalabka moobiilka, Sketch waa midka ugu fiican.
Barnaamij u heellan dulinka iyo in muddo sannado ah, iyo mahadsanid gaar u ahaanshaha Mac, ayaa ku guuleystey sacabkii naqshadeeyayaasha adduunka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sawir ka sameysid qaab ama aad u qaadatid qalabka qalin si aad u abuurto vectors oo markaa aad u qeexdo walxaha aan hadhow ku isticmaali doonno degel ama naqshad.
Sida Photoshop sidoo kale wuxuu leeyahay qalab kale oo aasaasi ah, haddaba haddii aad la socoto Mac ku sii diyaarso $ 99 si aad u hesho. Mid ka mid ah waxyaabaha aan looga maarmin adduunka ee naqshadeynta UI iyo UX.
Waxaan ku dhammeynay liiskan beddelaadyada ah Photoshop oo leh Paint.net. Mid barnaamijyada ugu fudud ee aan ku haysanno Windows iyo in qalooca waxbarashadiisu u saamaxeyso naqshadeeyayaasha cusub inay ku soo biiraan hal-abuurka dijitaalka ah. Rinjiga wuxuu ahaa barnaamij ay Microsoft ku daah-furtay laba nooc oo Windows ah, sidaa darteed waxay leedahay dhammaan aasaasiga si loo sameeyo wax ka beddelka aasaasiga ah iyo waliba dib-u-hagaajinta sawirro kale.
App fudud oo loogu talagalay miisaan hooseeya xagga waxqabadka iyo kaydinta kuwa aan rabin inay adeegsadaan barnaamijyada websaydhka oo doonaya inay barnaamij tayo leh ku yeeshaan kombuyutarkooda Windows PC.
Rinjiga-net - Web
Sidan ayaan ku dhamaynaynaa liistadan beddelka ah Photoshop Taas oo aan awoodi doonno inaan ku qabanno adoon lahayn Adobe, ama xitaa inaan muujinno inay weli tahay boqoradda abuurista dhijitaalka ah dhammaan ballaadhkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Beddelka ugu fiican ee Photoshop
Feejignaan ku saabsan xargaha 'anteenada' miyiga Ingiriiska
12 Bangiyada sawirka Creative Commons